Wasiir ka mida Xukuumada oo walaalkiis u magacaabay xilka ugu muhiimsan Wasaaradiisa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Wasiir ka mida Xukuumada oo walaalkiis u magacaabay xilka ugu muhiimsan Wasaaradiisa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiir ka mida Xukuumada oo walaalkiis u magacaabay xilka ugu muhiimsan Wasaaradiisa
Wasir ka mida xukuumadda xilgaarsiinta Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilka ugu muhiimsan wasaaradiisa u magacaabay nin ay ilma adeer yihiin, taas oo ah dhaqan ugub ku ah siyaasada Soomaaliya.
Wasiirkan oo lagu magacaabo Cabdi Sh. Axmed Rooble CAMEY ayaa walaalkiis C/laahi Axmed Maxamuud CAMEY u magacaabay Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, taas oo dhowaan soo shaac baxday.
Wasiirka ayaa bishii Agoosto 2021 u magacaabay isla xilkan nin ay isku jufo hoose yihiin, hase yeeshee waxaa la yaab noqotay in wasiirkan markan uu hoos u sii daadagay oo Soomaali oo dhan uu ka soo xushay nin ay ilma adeer yihiin.
Xogtan waxaa noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah agaasime waaxeedyada wasaarada iyo shaqaalaha xafiiska wasiirka. Waxayna shaqaalaha durba bilaabeen inay wasaarada ugu yeeraan magaca shirkada Reer CAMEY ex- wasaaradii boostada.
Dadka arintan la socda ayaa sheegay in ay macquul ahaan lahayd in wasiir uu walaalkiis siin karo jago loo tartamay oo uu ku guuleystay, balse aysan ahayn wax anshax ah in wasiir xil magacaabis uu siiyo ina-adeerkiis.
Dhinaca kale sadex shirkad oo dacwad ka gudbiyay wasiirka ayaa sheegay inay aad ula fajaceen magacaabista wasiirka. Waxayna sheegeen inaysan joojin doonin dacwada ay u gudbiyeen xafiiska madaxweynaha iyo bankiga aduunka.
Wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta ayaa ka mid ahayd wasaarado xilligan magacaabay xilal muhiim ah, taasoo keentay inuu waxba kama jiraan ka dhigo madaxweynaha muddo xileediisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.